Maka onye ọrụ ahụ, en na-ejikọkarị e-mail na ndị isi dị mkpa dịka Google ma ọ bụ Yahoo ebe ọ bụ n’efu na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla gbasara nchekwa.
Otú ọ dị, ụlọ ahịa na-enwekarị ihe dị iche iche a chọrọ, ọ bụkwa ihe dị mma ịchọrọ ilebanye anya na ozi ịntanetị e-mail.
Ọ bụ ezie na e nwere nsụgharị nsụgharị dị na ọtụtụ ụlọ ọrụ ntanetị, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-erite uru na mgbanwe na ike nke ọrụ e-mail. E-mail na-emekarị ka ozi-e na-elekọta site na ihe nkesa na-ezigara ma ọ bụ raara onwe ya nye.
– malite na $ 0,80 / mo
– malite na $ 3,99 / mo
– malite na $ 2,95 / mo
– malite na $ 2,96 / mo
Ngosipụta: WHSR natara ụgwọ ntugharị site na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ e-mail ndị a kpọtụrụ aha na ibe a. Echiche na nkwenye anyị dabeere na ezigbo ahụmịhe ọrụ na data ahịa.
1 Kedu ọrụ E-mail Bochum
1.1 Gịnị mere ị ga-eji chọọ E-mail-e-mail?
1.1.2 2- Nche data
1.2 Gịnị na-eme ezigbo E-mail Bochum?
2.1 1- Pakket (e-mail + Weebụ) Bochum
2.2 3- Enterprise-løsninger (SaaS)
Kedu ọrụ E-mail Bochum
Ọ bụ ezie na ọ bụghị isiokwu na njedebe nke ọnụ ọgụgụ ire ụtọ nke ire ụtọ, isi ihe nchịkọta azụmahịa nke azụmahịa abụghị ihe mgbagwoju anya. E-mail Bochum via n’ezie okwu na-enweghị atụ na nanị na-egosi ihe ọrụ na-akwado ozi ịntanetị gị. Dịka ụmụmaatụ, Gmail er ikke ens, vi er dse ka ozi-e.
Otú ọ dị, n’ime akụkụ nke isiokwu a, enhverị ga-eche na ị na-achọ na ịlele ozi ịntanetị gị. Nke a pụtara na ị ga-enwe njikwa zuru oke na ozi ịntanetị gị, site na ịmepụta adreesị na ịmepụta otu esi ejikwa ha gaa ebe ha na-echekwa.
Mgbe ezitere gị ozi e-mail ọ nwere nkọwa dị iche iche gụnyere adresị e-mail gị. Dabere na adresse ahụ, en na-eziga leta ahụ na ebe nchekwa edoziri ka ọ gaa. Ozugbo ọ ruru ebe ahụ ị nwere ike imeghe ma gụọ ya n’oge ọ bụla ị chọrọ.
Ọ bụrụ na ị zụrụ ngwugwu ọ bụla weebụ, ọ na-abụkarị ka ọrụ ntanetị e-mail dị n’ime ngwugwu weebụ gị. Ọ bụrụ na ịnweghị mgbe ahụ ị ga-achọ ịchọ nchịkọta nchịkọta e-mail iji jiri ngalaba omenala maka e-mail gị.
Gịnị mere ị ga-eji chọọ E-mail-e-mail?
Mgbe m na-eji okwu azụmahịa azụmahịa ezite ihe m na-ekwu n’ezie na-eji omenala ngalaba maka ozi ịntanetị gị. Indflydelse ụtụtụ ihe bare ị ga – eji men nke et sted n’aka ọkachamara na nchekwa data. Ụdị azụmahịa, ego a naghị akwụ ụgwọ, uru a na-akwụ karịrị nnọọ ụgwọ ndị ahụ.
Ka anyị tụlee ihe abụọ ọhụụ ebe otu ụlọ ọrụ na-eji ozi ịntanetị azụ ahịa mgbe onye nke ọzọ jiri ọrụ e-mail n’efu;
Ụlọ ọrụ A – [Email na-echebe]
Ụlọ ọrụ B – [Email na-echebe]
Ụlọ ọrụ B ụlọ ọrụ e-mail ga-adị iche nye gị, onye nwe ụlọ. Aha ụlọ ọrụ B nke ụlọ ọrụ B na-egosipụtakwa ọrụ ọkachamara na nraranye nye azụmahịa ya nke ụlọ ọrụ ahụ nwere.
2- Nche data
Webstedet er ikke tilgængeligt, det vil sige, det vil være nødvendigt at gøre det. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nọ na azụmahịa ebe e nwere ụfọdụ ụkpụrụ dị ka datalokalisering, ị nwere ike ịchekwa ozi ịntanetị gị na sava na ebe ụfọdụ.
Ndị ahịa taa na-ekwusi okwu ike site na email. O yikarịrị ka ụfọdụ n’ime ozi ịntanetị ga-agụnye ozi dị mkpa dịka ịgba ụgwọ, ịnye akwụkwọ, nkwekọrịta na ihe ndị yiri ya. Site n’iji ozi nchọta nke onwe gi, ị ga-enwe ike ịkwado ọnọdụ ndị ga – esi na nsogbu e-mail.
Ozi e-mail ma ọ bụ nke mebiri emebi nwere ike imetụta azụmahịa gị na nkwado nke na-abịa na ụlọ ahịa e-mail azụmahịa nwere ike ịba uru.
Gịnị na-eme ezigbo E-mail Bochum?
Ọtụtụ n’ime àgwà ndị ezigbo ụlọ ọrụ weebụ nwere kwesịkwara ịnọ na ezigbo nnabata e-mail. N’ime àgwà ndị a, elu nke ndepụta gị kwesịrị ịdabere na mgbanwe. Ihe ndị ọzọ gụnyere:
Dịka azụmahịa, ndị ahịa gị kwesịrị inwe okwukwe na iguzosi ike n’ezi ihe nke azụmahịa gị. Ha na-enyefe gị ozi nzuzo, dịka aha, adreesị ozi-e na ikekwe ọbụna data nchịkọta ego. Emaildebe e-mail gị dị mkpa, ị ga-elepụ anya maka njirimara ndị dịka nchekwa data, mgbochi malware, mgbochi spam na ihe ndị dị ka onye na-akpọ email.
Anyị na-enyocha e-mail anyị site na nyiwe dich ich ich na ọ nwere ike ịdị mfe ichefu na nke ọ bụla n’ime ha nwere ike ịchọ nhazi dị ich ich. Mgbe ị na-achọ onye na-eweta nnabata e-mail, hụ na ị nwere ohere ịnweta webmail, POP na IMAP.
Webmail na-enye ghere ohere iji onye na-eweta ozi-weebụ nke na-adaba adaba. IMAP na-enye gị ohere ịgụ ozi e-mail gị site na ngwaọrụ ọ bụla n’enweghị ibudata ha. POP n’aka nke ọzọ chọrọ ka ibudata ozi ịntanetị gị tupu ị gụọ ha.
Inwe adreesị IP gị sortlistet bụ ụzọ doro anya ị ga-ahụ ọrụ azụmahịa gị (karịsịa ndị ahịa!) Gwuo ya ngwa ngwa. Nike a nwere ike ịbụ nsogbu dị mkpa dịka otu IP gị na-achọpụta na ọ nawe ewe oge na mgbalị iji mee ka ọ dị ọcha ọzọ. Zere ndị ọrụ ozi e-mail ndị nwere aha ọma maka inweta ndị ahịa na ndị na-eto eto ka ị ga-ejedebe na IP nke a na-emegharị ma na-adị na blacklist.
W nwere ike ịlele ọkwa nchịkọta ozi nke ụlọ ọrụ e-mail jiri Mboxbox MX.
1- Pakket (e-mail + Weebụ) Bochum
Bundtet e-mail-hosting af mgbe ị nwetara ntanetị e-mail na-abịa yana (bare en okwu ahụ bụ ‘bundtet’) akaụntụ weebụ weebụ gị. Dabere na mkpa gị, nke a nwere ike ịba uru dị ukwuu ebe ọ bụ na ị gaghị mkpa ijikwa ozi ịntanetị na akaụntụ dị iche ma ọ bụ kwụọ ụgwọ maka nchịkọta e-mail.
Otú ọ dị, en na-ejikarị ịchọta ịchọta e-mail e-mail ihe na nehehere site na mkpokọta ikike nke akaụntụ ntanetị weebụ gị. Otutu ngwunye na-ekenye otu ohere nke na-eketa n’etiti e-mail gi na ntanetakota. E wezụga na ohere, ị na-eketakwa ego nke bandwit ekenye na akaụntụ gị.
uru – Mfe iji-opsætning, njirimara atụmatụ, nnabata ọtụtụ obere akaụntụ e-mail na otu ọnụahịa.
Ọrụ nchọta ozi-e kacha mma? Ọ bụghị ụlọ ọrụ ntanetịime weebụ na-enye atụmatụ raara onwe har nye maka ozi-e, ma dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịchọta ihe atụ zuru oke nke ezigbo ọrụ ịchọtara ozi-e raara on.
3- Enterprise-løsninger (SaaS)
Tillad n-enye ọrụ dịka Google til Microsoft ndịnwere nchịkwa e-mail med G Suite til Microsoft 365 Business. Ndị a b r ọrụ e-mail raara onwe har nye bụ ndị dị mfe iji ma dị ike kama ọ dị mkpa ka ejikwa ha rụọ ọrụ iche ich site na Bochum ọbụlagodi na ha nwere ike iji aha ngalaba omenala gị.
Ihe dị na nke a bụ na ọrụ ahụ nwere ike ịkwụsị ụgwọ dị oke ọnụ ka ụda ọrụ gị na-abawanye. Dịka ụmụmaatụ, G Suite nwere ike ịnweta $ 5,40 naanị maka atụmatụ atụmatụ, mana nke ahụ bụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ onye ọ bụla kwa ọnwa.
ọghọm – Ụrụ nlekọta ọzọ. Ego – ego ọzọ iji nweta akaụntụ e-mail.
InterServer dabere efter New Jersey kan være en ruo iri afọ abụọ ugbu a – ọ dị ogologo oge maka onye ntanetị weebụ. Akpa webata dị ka onye na-ere ahịa na akaụntụ Bochum nke ọma ugbu a na-ekpuchi ihe niile nke web hosting service spektrum.
Ọrụ: Bundtet og dedikeret hosting af e-mail.
Ọbụnadị n’etiti ndị nnabata web na-akwụ ụgwọ mmefu ego, NameCheap na-abịa dị ka ọnụ ala (enweghị pun zubere). Websted, der går ned på Bochum, der ikke er et amalit, der koster $ 1,44, skal bruges til at blive mmelit og have nogen som helst ụfọdụ ọnụahịa kachasị ala na ụlọ ọrụ. E wezụga Bochum, AhaCheap na-enyekwa ngwaahịa ndị ọzọ dịka ngalaba aha na ọrụ nchekwa.
Wezụga atụmatụ ọnụahịa Starter ha dị ọnụ ala, Namecheap nwere ọrụ dị iche iche gụnyere ndị ọbịa e-mail nke onwe. Site ntakịr 0. kan $ 0,99 / mo ị nwere ike nweta ọ bụghị naanị nnabata e-mail kamakwa ụfọdụ ohere maka nchekwa faịlụ. Ụnụ ahịa na-arị elu dabere na ọtụtụ igbe akwụkwọ ozi ịchọrọ.
Hostinger dabeere na Kaunas, Litauen ma na-enye ọtụtụ atụmatụ nhazi. Ihe kacha mma gbasara web hosting har b ha na ọ na-abịa na bundtet e-mail hosting yana. N’agbanyeghị ma ọ bụrụ na ị debanye aha maka ha na-akwado Bochum atụmatụ ma ọ bụ ọbụna VPS Bochum, ha nwetara gị email-echebe kpuchie.
Gå til Los Angeles, Californien, InMotion Bochum og få gburugburu maka ihe karịrị afọ 15. Ụlọ ọrụ ahụ abụwo otu n’ime ndị ọrụ anyị nwere mmasị maka ọtụtụ ihe na ọbụlagodi ha web hosting na-abua naa nir.
Ọrụ: Bundlet e-mail-hosting.
Site na ndekọ ọrụ afọ iri n’okpuru eriri ya, TMDhosting abụwo onye mmekọ ntụkwasị obi maka ọtụtụ ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ kemgbe ọtụtụ afọ. O nwere otutu ebe data gbakọtara na US gbakwunyere na Netherlands. Websted, der ikke er malitere websted, der kun koster $ 2,95 for at modtage en e-mail med en e-mail til at skrive Bochum ha.
Enhver Na-atụle A2 Bochum kan ikke sælges ụlọ ọrọ weebach kachasị elu na ya nwere mgbasa ozi ọma nke ebe nchekwa data gburugburu ụwa – na Amsterdam, Singapore, Arizona, Arizona, Michigan. Ọ na-enye usoro ihe dị oke egwu ma jikọta ya na nnukwu ahụmịhe ahịa na ọnụ ahịa ego bara uru.
Kachasị mma webhosting vælger